Home casino online cz resorts world casino
Nnyocha a amalitela ịkọwa ihe omimi nke gbara onye Australia Australian Instagram nlereanya Sinead McNamara, mgbe a chọpụtara ozu ya Friday na ọdụ ụgbọ mmiri nke otu onye billionaire Mexico nọ na Gris.
A chọtara McNamara dị afọ 20 amaghị ihe dị ka elekere abụọ nke ụtụtụ. Friday na azụ Mayan Queen IV na ọdụ ụgbọ mmiri Gris nke Argostoli na Kefalonia, news.com.au kọrọ.
JONATHAN NYERE ISI BAFARAWA MMALITE NA OSO PDP
Dọkịta nọ n’ụsọ ụgbọ mmiri na ndị na-ahụ maka ọdụ ụgbọ mmiri gbalịrị ime ka ndụ ya dị ka helikọpta bịarutere ebe ahụ iji kpọga ya n’ụlọ ọgwụ.
Ọ nwụrụ mgbe ọ na-aga n’ụlọ ọgwụ, akụkọ ndị obodo ahụ kwuru. E gosiputaghi ọnwụ ya.
“Ndị na-ahụ maka nchebe na Coast nke Kefalonia nyere iwu ka a nyochaa ọnọdụ ndị dakwasịrị ọnwụ nke afọ 20 nke Australian dịka nke a na-ahụkwa na ọ na-eme ka ọ bụrụ onye na-adịghị mma,” ka ndị na-ahụ maka mgbasa ozi n’ógbè ahụ na Kefalonia kọrọ.
McNamara, onye a kọwara dị ka ihe nlereanya Instagram na ihe karịrị ndị na-eso ụzọ 15,000, nọ na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri $ 140 nde maka ọnwa anọ gara aga.
Ụgbọ mmiri 300 dị n’ụdị ụgbọ mmiri Mexico bụ Alberto Bailleres, bụ onye bara uru na atụmatụ $ 6.9.
A kọrọ na Bailleres abụghị na Gris mgbe McNamara nwụrụ. Ọ hapụrụ ụgbọ mmiri na Tuesday na McNamara wee nọrọ n’ụgbọ ahụ na ndị ọrụ. O doro anya ihe merenụ na ụbọchị ole na ole sochirinụ na-eduga n’ọnwụ ya.
Ndị ọchịchị nyere iwu ka ụgbọ mmiri ahụ nọgide na ọdụ ụgbọ mmiri ahụ ka nchọpụta ahụ gara n’ihu.
Akụkọ na-ekwu na ihe nlereanya ahụ na-arụ ọrụ na yachts ka ọ na-aga Europe. Nne ya, Kylie, na-aga Gris mgbe a gwara ya na nwa ya nwanyị nwụrụ.
O kwesịrị ka McNamara gaa Grik nke Pylos tupu ya anwụọ.
“Enwere m mwute ikwu na akụkọ kachasị njọ nke ndụ m; Sinead agabigala, “nwanne ya nwoke bụ Jake McNamara gwara otu akwụkwọ akụkọ Australian.
A na-atụ anya McNamara ka ya na nwanne ya nwanyị bụ Lauren nọrọ. O dere banyere obi ụtọ ya ịhụ nwanne ya nwanyị gara aga na ụbọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ.
“Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ na nwanne m nwanyị kachasị ịtụnanya m nwere ike ịrịọ, 5 ụbọchị ruo mgbe m ga-ahụ gị !!! Obi ụtọ bụ nkwenye okwu, “McNamara dere na Instagram.
Ndị enyi McNamara na ndị na-eso ụzọ ya ejirila obi ụtọ jupụta n’ụdị mgbasa ozi ọha na eze ahụ, na-ekwu na ọnwụ ya na-eju ha anya.
Pingback: JIM YONG KIM MAKA OKWU NKE ABUO NA ULO AKU UWA